Le ndlu yangasese ikwindawo entle yeDaruka Homestead. Misa kwiihektare ezingama-54, ungqongwe ngamahashe, iialpacas kunye neechoki, iinkomo zeBelted Galloway, idonki yaseIreland encinci, izinja kunye neekati ezigcina uthango kunye nezongezo ezintsha, amatakane angamawele angamaDorper.
Indawo enoxolo, ibekwe kwimizuzu eli-10 ukusuka eTamworth.
Singakwenzela ihashe lakho ukuba uhamba. Amalungiselelo angaphambili kufuneka enziwe ngeli nqaku, kuya kubakho iindleko ezongezelelweyo ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho zamahashe.
Iindwendwe zikhululekile ukuba zizulazule kule ndawo, ziphakele amatakane aziinkedama, akukho ndlela yokungena kumadlelo okanye iiyadi ngaphandle kokuba sinikeze imvume, oku kukukhusela iindwendwe zethu kunye nemfuyo ehlala apha.
Zonke iingcingo zifakwe umbane. Nceda UNGABAmbi!
Ukuba uziva unamandla, ungahamba uye encotsheni yenduli emva kweHomestead. Ngumceli mngeni omkhulu ukuba unokuwufikelela!
Sifumaneka kumgama oyi-11.9km ukusuka eposini kumbindi weTamworth.
Sihlala kwindawo ezolileyo, ezolileyo neyimfihlo, ukufikelela kwindlela yebhitumene.
Ibekwe kwiihektare ezingama-54. Kukho iindawo onokuthi uhambe kuzo ukuba uluhlobo olunomdla. Okanye phumla nje, mhlawumbi wenze uhambo losuku ukuya kwenye yeedolophu ezikufutshane.
Ndifumaneka ngamaxesha amaninzi, nceda uzive ukhululekile ukubuza nayiphi na imibuzo malunga nepropati kunye nommandla wendawo, ubuso ngobuso, i-imeyile, umnxeba okanye umyalezo.
Nceda uqaphele ukuba AKUKHO ukuzingela okukhoyo kwipropati yethu kwaye AKUKHO mipu yayo nayiphi na inkcazo evumelekileyo.
Ndifumaneka ngamaxesha amaninzi, nceda uzive ukhululekile ukubuza nayiphi na imibuzo malunga nepropati kunye nommandla wendawo, ubuso ngobuso, i-imeyile, umnxeba okanye umyalezo…